Tun Tun's Photo Diary: Mandalay Assorted Fritters (မန္တလေးအကြော်စုံ)
After having fritters and sticky rice, I think I still can have some and tried their Fish soup noodle (Arr Pu Shar Pu). I might be full but the fish soup taste is not so impressive as expected. I prefers the Fish soup from this stall.
The stall is quite well known and located at the corner of 32 street and 68 street , Mahar Aung Myay Township, Mandalay.
at 3/31/2011 05:06:00 AM
Anonymous March 31, 2011 at 6:26 AM
အစ်ကို ညီ ကင်မရာ ဝယ်မလို့ အစ်ကို အကောင်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို အိမ်သုံးလောက်ပေါ့ Nikon L120 Coolpix Black ဆိုတာလေးက ကောင်းလား အစ်ကို ညီကို ပြန်ပြောပေးပါအုံးနော်
ညီ ဝယ်ရင်တော့ $200 တန် $300 တန်လောက်ပေါ့ ညီ mail က konaing14@gmail.com ပါ ဘယ်လိုဟာက ဝယ်သင့်လဲဆိုတာကို ညီကို အကြံပေးပါအုံးနော်အစ်ကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်
ွှTun Tun March 31, 2011 at 6:59 AM
Hi Ko Naing,
ကျွန်တော် အရင်က သုံးတာ Nikon P80 အခုထိ ရှိသေးတယ်။ သူ.ဈေးနဲ.သူ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ မကြီး မသေးလေး ဆိုတော့ သယ်ရလွယ်တာပေါ့။ အစ်ကိုပြောတဲ့ Nikon L120 ကို ဂူဂဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး ဒါပေ့မယ်။ သူက AA battery သုံးထားတာ ကို တော့ ကျွန်တော်သိပ်မကြီုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ဈေးချိုတာပေါ့။ သူများတွေ တော့ ကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်။ နေရာမရွေး battery ၀ယ်ထည့်လို.ရတယ်ပေ့ါလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ Lithium လို.ခေါ်မလား အဲ့ဒီ တနာရီလောက်အားသွင်း ပြီး အကြာကြီး သုံးလို.ရတဲ့ ဘတ်ထရီ သုံး တဲ့ ကင်မရာတွေကို ပိုသဘောကျတယ်။
တကယ်လို. Japan Made Rechargeable AA battery (eneloop battery) ၀ယ်သုံး မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး။
တခါမြန်မာပြည်ကို ဈေးသက်သာလို. AA battery သုံးနဲ. ကင်မရာ ပို.ပေးလိုက်တာ။ ဈေးပေါတဲ့ Battery ၀ယ်သုံးလို.ထင်ပါတယ်။ ၄ ပုံ ၅ ပုံ လောက်ရိုက်ပြီးတာနဲ. Battery low ဖြစ်နေတယ်လို.ပြောလို. (Rechargeable eneloop battery) ၄လုံးပါ (S$40) ၀ယ်ပေးလိုက်တာ ပါးစပ်ပိတ်သွားပါတယ်။း)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သေးသေးလေး အပျော်တမ်း သုံးချင်ရင်တော့ အခုတလော လူသုံးများတဲ့ Canon IXUS 210 ကိုညွန်းချင်တယ်။ ပုံထွက် မဆိုးဘူး။ စလုံး ၃၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော် အစ်ကို
ညီလင်းသစ် March 31, 2011 at 2:04 PM
အကြော်တွေက စားချင်စရာပဲ၊ မနက်စောစောမှာ အေးအေးဆေးဆေး ၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရွေးလို့ ထိုင်စားလိုက်ချင်တယ်...။
တောင်ငူသား April 2, 2011 at 9:34 PM
AA battery သုံးတဲ့ digital camera တွေအတွက် ဓါတ်ခဲက သီးသန့်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာရိုက်လို့ရပါတယ်။
ရိုးရိုး နာရီတွေထဲ ထည့်တဲ့ ဓါတ်ခဲသုံးမိလို့ လေးငါးပုံလောက်နဲ့တင် အားကုန်သွားတာပါ။ ဈေးကလဲ လေးငါးဆ လောက် ကွာပါတယ်။
မတ်ပဲကြော် နဲ့ဂွေးတောက်ရွက် ကြော်ချက်လေး ချက်စားချင်တယ် ...